Tanàna Espaniola tsara indrindra hitsidihana fiara amin'ny lohataona | Vaovao momba ny dia
Tanàna Espaniola tsara indrindra hitsidihana fiara amin'ny lohataona
Vaovao momba ny dia | | Toerana fitsangatsanganana
Araraoty fa mihena tsikelikely ny hatsiaka ary mihamafana ny hafanana amin'ny fitsidihana ny iray ireo tanàna 6 tsara indrindra any Espaina handany fialantsasatra mahafinaritra amin'ity lohataona ity.
ARY… Inona no tsara kokoa noho ny mandeha miaraka amin'ny fiaranay? Ampidirinay ny bara tafo mankany amin'ny fiaranay sy amin'ny traikefa nahafinaritra! Vonona ve ianao hahita ireo tanàna avo indrindra amin'ity vanim-potoana ity? Mamaky hatrany!
5 Córdoba sy ny patio tamin'ny Mey
Eny Mazava ho azy. Madrid dia tanàna mahafinaritra. Mety hangatsiaka be amin'ny ririnina raha avy amin'ny tanàna mafana kokoa ianao, ary mety mafana be amin'ny fahavaratra raha avy any amin'ny tanàna mangatsiaka kokoa ianao. Na izany aza, teraka indray izy ary mamony amin'ny lohataona. Ny masoandro, izay efa mafana kokoa, manasa mandehandeha mangina amin'ireo arabe mahafinaritra sy zaridaina misy ravina.
Amin'ny lohataona, afaka mandeha mitsangatsangana ianao Zaridaina fisotroan-dronono tsara (manofa sambo eny ambonin'ny farihy), mitaingina bisikileta mamaky an'i Parque Juan Carlos I na Madrid Río. Ary raha tsy te-handeha ianao dia mamporisika anao izahay hamandrika fitsangatsanganana an-tanàna amin'ny bus fitaterana an-kalamanjana misokatra mba hanararaotra ny toetrandro tsara na hanarahana ny làlan'ny fiaranao: Ny safidy ekonomika sy ahazoana aina indrindra!
Ary maninona no tsy miakara amin'ny fiara tariby ary mankafy ny renivohitra Espaniola avy any ambony, raha mandro amin'ny tara-pahazavana voalohany amin'ny masoandro fahavaratra ianao?
Raha tsy mafana be any ivelany dia afaka foana mitsidika ny Royal Palace sy ny katedraly Almudena.
Ny fahasamihafan'ny jeografia espaniola dia manasarotra ny manapa-kevitra hoe aiza no toerana tsara indrindra.
Na izany aza, misafidy isika ny pyrenees satria amin'ny lohataona dia mbola misy lanezy eo amin'ny tampon'ny havoana avo indrindra, maintso any an-dohasaha ny maintso ary mivoaka avy amin'ny lafiny rehetra ny rano, mamela ny ony hikoriana amin'ny hery. Tsy mila karazana sivana satria mirehitra voninkazo maniry ny saha, miseho ny masoandro ary tena manga ny lanitra. Mihalava ny andro, ary miaraka miaraka ny zava-drehetra hamoronana atmosfera tena mahafinaritra.
Nahafinaritra anay koa ny tanàna kely misy trano vato, solafaka ao anaty taila sy fitoeram-boninkazo eo am-baravarankely, ary koa ny arabe misy fiolahana maro sy fifamoivoizana kely.
Ny lohataona dia fotoana mety hitsidihana an'i Benidorm. Na dia maro aza no milaza fa tsy izany dia ny marina mihoatra ny masoandro sy ny morontsiraka izy io.
Benidorm dia manana tanàna tranainy be mpandeha an-tongotra, misy bara maro izay Manompo papier avy amin'ny lafivalon'i Espaina izy ireo ary miaraka amin'ny rivo-piainana mahafinaritra eny amin'ny terraces. Ho fanampin'ny faritra tapas dia manana trano fisakafoanana maro isan-karazany i Benidorm lakozia iraisam-pirenena avy amin'ny lafivalon'ny tany rehetra.
Azonao atao ihany koa ny mankany amin'ny Mirador de Benidorm, izay iray amin'ireo tandindon'ny tanàna ary mampifandray ireo morontsiraka roa. Amin'io fomba fijery io afaka mankafy fomba fijery mahavariana amin'ny filentehan'ny masoandro sy ny fiposahan'ny masoandro ianao.
Miarahaba antsika i Valencia amin'ny toetrandro mafana, terraces miandry ny hamenoana ary ireo paellas tsara indrindra azon'i Espana atolotra, voaomana vaovao amin'ny latabatra ivelany. Tsy hisy olona betsaka toy ny amin'ny fahavaratra, noho izany hanana ny morontsiraka irery isika handehanana eny amoron-dranomasina ary angamba hihinana gilasy.
Afaka mandeha any amin'ny City of the Arts, mandeha manodidina ny tanàna, mankanesa any Zaridaina botanika… Ary betsaka kokoa!
Córdoba sy ny patio tamin'ny Mey
Córdoba no toerana tsy maintsy zahana any Espana amin'ny Mey, miaraka amin'ny hazo fijaliana sy patio, varavarana ary hazo volomboasary amin'ny volana Mey mamony. Raha ampitahaina amin'ny volana hafa amin'ny taona, mandro amin'ny hazavana sy loko ny tanàna. Ankoatr'izay, nandritra ity volana ity dia notontosaina ny fifaninanana malaza Maystick, ary trano tsy miankina maro no manokatra ny tranony ho an'ny besinimaro, feno voninkazo, antsipiriany ary fijerena akaiky an'ireo rehetra mandalo.
Moske-katedraly malaza eran-tany hamela anao hiteny, ary mandehandeha mamaky ny telovolana jiosy, manandrama tapas ao amin'ny trano fisotroana ary ahitanao ny sasany amin'ireo vatosoa miafina ao an-tanàna, toy ny Viana Palace sy ny Alcazar Gardens, tena fahafinaretana io. Tanàna milamina miaraka amin'ny tantara an-jato taonina ary fifangaroan'ny kolontsaina maro karazana izay tsy handiso fanantenana.
Sevilla dia toeran-kaleha mahafinaritra amin'ity vanim-potoana ity ho an'ny foara amin'ny volana aprily, izay iray amin'ireo foibe Andalosiana maharitra hatramin'ny lohataona. Mpizahatany maro no misafidy ny renivohitra Andalosiana ho an'ny fitsangatsanganany lohataona ho an'ny voninkazo izay mandravaka ny lalàny, ny atmosfera fankalazana ny mponina ao aminy sy ny hakanton'ilay faritra.
To visit fampisehoana flamenco any Seville Izy io dia iray amin'ireo hetsika ilaina, miaraka amin'ny fandehanana mamaky ireo tsangambato, mitaingina kalesy mitaingina soavaly ary manandrana ny gastronomika eo an-toerana. Afaka andro vitsivitsy dia ho afaka hahafantatra izay rehetra fantatra momba ny tanàna ianao. Ny fitsangatsanganana amin'ny faran'ny herinandro any Seville amin'ny lohataona dia hahatonga anao ho tia ny tanàna ary haniry ny hiverina amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona.
Fantatrao izao izay tanàna espaniola tokony hovangianao. Aiza no hanombohanao ny dianao? Aza adino fa tsy maintsy mifanaraka amin'ny lalàna apetraky ny fanjakana vonjy maika Covid-19 ianao. Fantaro ny fitsipiky ny fiarahamonina tsirairay ary ankafizo ilay dia.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Toerana fitsangatsanganana » Tanàna Espaniola tsara indrindra hitsidihana fiara amin'ny lohataona